बढ्दो कोरोना भाइरस र बच्ने उपाय – Chitwan Post
बढ्दो कोरोना भाइरस र बच्ने उपाय
भरतपुर । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को संक्रमण चीनको वुहान हुँदै अहिले विश्वका लगभग सबै भूभागमा नै फैलिसकेको छ । कोरोना भाइरस कुनै जनावरबाट मानिसमा फैलिएको आशंका गरिए पनि यसको पुष्टि भने अझै हुन सकेको छैन । पर्याप्त सावधानी नअपनाएकै कारण यसको असर विश्वभर फैलिएकोमा शंका छैन । यो भाइरसको पहिचान सन् २०१९ को अन्तिमतिर भएको थियो । कोरोना के हो र कसरी सावधानी अपनाउने भन्नेबारे प्रस्तुत छ, एक रिपोर्ट :
अहिलेसम्म कोरोनाको संक्रमणबाट विश्वभर करिब २० हजार मानिसको ज्यान गइसकेको छ भने करिब ५ लाखको हाराहारीमा संक्रमण देखा परेको छ । १ लाख १५ हजारजति संक्रमित व्यक्ति उपचारपछि निको भएको विभिन्न रिपोर्टहरूले बताएका छन् ।
के हो कोरोना भाइरस, कसरी पहिचान गर्ने ?
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार कोरोना भाइरस विभिन्न भाइरसहरूको समूह हो । यो भाइरस सुरु सुरुमा सामान्य रुघाखोकीबाट आरम्भ भई पछि ज्यानै लिने किसिमको हुन्छ । यो भाइरस मानिस र जनावर दुवैमा देखिन सक्ने बताइएको छ । यो भाइरसको संक्रमण भएपछि सुरुसुरुमा श्वासप्रश्वासको समस्या देखिने र पछि निमोनिया हुने, मिर्गौलाले काम गर्न छाड्ने र कलेजोमा तरल पदार्थ वृद्धि हुनेजस्ता लक्षण हुन्छन् । कोरोना भाइरस छिटो सर्ने भएकाले पनि मानिसहरूमा यसले अझ महामारी फैलाउन सक्ने आशंका गरिएको छ ।
कोरोना भाइरसको संक्रमणपछि पहिचान हुन नै करिब २ हप्ता कुर्नुपर्ने र यसअघि नै कोरोना मानिसमा सरिसक्ने भएकाले यसको जोखिम अत्यधिक बढेको हो । न्यू इङ्ल्यान्ड जर्नल अफ मेडिसिनको एक रिपोर्टअनुसार कोभिड–१९ को संक्रमणको उच्च जोखिम मानिसमा यसका लक्षण देखिन थालेपछि क्रमशः हुने उल्लेख छ । कोरोना भाइरस फ्लुजस्तै गरी फैलने सो रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोग भएका, वृद्धवृद्धा तथा डायबेटिज र उच्च रक्तचाप भएका व्यक्तिमा यसको उच्च जोखिम हुने विभिन्न रिपोर्टहरूमा बताइएको छ । शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताले ब्याक्टेरियासँग कसरी जुधिरहेको छ भन्ने कुराले यसको जोखिम निर्धारण गर्ने सरुवा रोग विशेषज्ञहरूले जनाएका छन् । विशेषगरी, ज्येष्ठ नागरिक जसमा मुटुरोग, डायबिटिज र अरू श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोगहरू भएका व्यक्तिलाई सुरुमा निमोनियाबाट आरम्भ भएर शरीरका अङ्गले काम गर्न छाड्नेसम्म हुन्छ ।
कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मानिसहरूमाझ त्रास फैलिएको छ । महामारी विज्ञका अनुसार यसको तयारी भनेकै धैर्य हुनु हो । आत्तिएर समस्याको हल नहुने हुँदा यसको सतर्कता भनेकै यसलाई सामना गरेर अघि बढ्नु हो । यसको नियन्त्रणका लागि सधैँ साबुनपानीले हात धुने र हाच्छ्युँ गर्दा नाकमुख छोप्नु उत्तम हुने देखिन्छ । यदि बिरामी भएमा घरमा बस्नु नै यसको नियन्त्रणको उचित उपाय हो । शौचालय गएपछि र हाच्छ्युँ गरेपछि करिब २० सेकेन्डजति साबुनपानीले हात धुनुपर्छ । नाङ्गे हातले आँखा, नाक, मुख छुनुहुँदैन, साथै भीडभाडयुक्त ठाउँमा मास्क लगाउन भुल्नुहुँदैन ।
मास्क लगाउनु कत्तिको आवश्यक छ ?
यदि तपाईं पहिल्यैदेखि बिरामी हुनुहुन्छ र चिकित्सक होइन भने यसको एउटा छोटो उत्तर भनेको मास्क ‘नलगाउनु’ नै हुन्छ । मास्क लगाउनुमात्रै नियन्त्रणका लागि पर्याप्त छैन । मास्क लगाउनु भनेको आफूमा रहेको भाइरस अरूमा फैलन नदिनका लागिमात्रै हो । सामान्य सर्जिकल मास्कले बिरामी व्यक्तिको मुखबाट आउने छिटाहरू रोक्ने भएकाले यसको प्रयोग विशेषगरी चिकित्सक र बिरामी व्यक्तिले गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
पूर्ण नियन्त्रण कहिले हुन्छ ?
कोभिड–१९ मौसमी हुन सक्ने विज्ञहरूले बताएका छन् । जाडो मौसममा यसले छोडेको असर गर्मी अत्यधिक बढ्दै गएपछि बिस्तारै कम हुँदै जानसक्ने विश्वास गरिएको छ । यसको अधिक संक्रमण उत्तरी क्षेत्रतिर ज्यादा देखिएकोले पनि यसको असर गर्मीको समयमा कम हुने विश्वास गरिएको हो । कोरोना अरू नियमित फ्लुजस्तै भएको तर कसरी फैलन सक्छ भन्ने विषयमा अझै यकिन गर्न भने सकिएको छैन ।
कतार हुँदै नेपाल आएका चितवनका छ जनाको खोजी गर्दै प्रहरी
भरतपुर अस्पतालमा सुरक्षा सतर्कता : औषधि किन्न सेतो घेरा
भरतपुर अस्पताल विकास समितिमा डा. भोजराज
दुई जहाजमा आएका नवलपुरका छ जना नै क्वारेन्टाइनमा
रोटरी क्लबद्वारा भरतपुर अस्पताललाई पिपिई सामग्री हस्तान्तरण
हेटौंडाको वजार क्षेत्रमा ‘डिस–इन्फेक्टेन्ट’ छर्किन सुरु
राप्ती ४ मा डिसइन्फेक्सन छर्न सुरु